Wholesale Chinese Alpine Green Tea Tei Biluochun Tea Mugadziri uye Mutengesi | Maokun
Chinese Alpine Green Tea Tei Biluochun Tea
Biluochun tii yaive nemukurumbira kutanga kwaSui neTang Dynasties, ine nhoroondo inopfuura chiuru. Iyo ndeimwe yetii dzakakurumbira munyika medu uye ndeyeti green tii. Ngano dzinoti Emperor Kangxi weQing Dynasty akashanyira Suzhou kumaodzanyemba ndokuipa zita rekuti "Biluochun". Nekuda kwenzvimbo yakasarudzika yenzvimbo yeDongting Mountain, maruva ari kuenderera mukati memwaka wese, uye miti yetii nemiti yemichero inodyarwa pakati payo, saka Biluochun tii ine yakakosha ruva hwema.
Biluochun itsika yechiChina inozivikanwa tii, imwe yetii gumi dzepamusoro dzeChina dzinozivikanwa, dziri muchikamu cheti green tii, ine nhoroondo yeanopfuura makore chiuru. Biluochun inogadzirwa muEast Dongting Mountain uye West Dongting Mountains (yava kunzi Wuzhong District, Suzhou) muTaihu Lake, Wu County, Suzhou City, Jiangsu Province, saka inonziwo "Dongting Biluochun".
Biluochun yekugadzira maitiro
Dongting Biluochun tiyi ine hunyanzvi hwekunhonga uye hunyanzvi hwekugadzira, uye kunhonga kwayo kune maitiro matatu: imwe ndeyekutora kare, imwe ndeye kuitora zvinyoro, uye chechitatu kuitora zvakachena. Gore rega rega, rinocherwa rakatenderedza equinox yemvura uye mvura inopera. Kubva pane vernal equinox kusvika kuQingming mwaka, mhando yeti pamberi peMing Dynasty ndiyo inonyanya kukosha. Kazhinji, bundu rimwe uye shizha rimwe zvinotorwa. Iyo mbichana zvinhu zvehurefu hurefu ndeye 1.6-2.0 cm. Rakaumbwa-rakaita runyoro rwakaita serurimi rweshiri, rwunonzi "rurimi". Zvinotora anenge 68,000-74,000 mabhudzi kuti fry mazana mashanu magiramu eepamusoro-giredhi Biluochun. Nhoroondo Pakanga paine angangoita mazana mapfumbamwe emakumi emabhuru emazana magiramu eiyo yakaoma tii, inoratidza hunyoro hwayo uye nekudzika kunoshamisa kwekutora. Iwo manyoro mabukira uye mashizha akapfuma muamino acids uye tii polyphenols.
Pashure: ChiChinese Yakakurumbira Tea Tema Pingyang Huangtang Green Tea Organic
Zvadaro: Green tii hombe Buddha 2021 nyowani tii
Jiangshan Gomo Green Peonies Chazhidao Chin ...
Huang Shan Mao Feng Chinese Green Tea Inoda kuziva Tea